Dhijitari Kushambadzira uye SEO yeMabhendi neMimhanzi
Muvhuro, Ndira 19, 2015 Douglas Karr
Iwe unogona kuwana kuravira kwangu mumimhanzi zvakatsamwa, ndinonyanya kufarira bhendi remuno Joinha Vakafa pano muIndipolis. Kwemakore, ini ndave kuwanda uye nekuwedzera fan yeanorarama, isina kujeka, uye emuno mabhendi. Ndinoda kuva nedoro nebhendi uye ndinofarira ruzivo rwemuno rwemuno zvakanyanya kupfuura rimwe bhendi randisinganyatso kuona kubva kuzvigaro zvine mabonzo emumhino munhandare yemuno kana nhandare. Kuva
CoPromote inzvimbo yekushambadzira yemagariro apo vashandisi vanosarudza kugovana zvemumwe zvemukati. CoPromote idandemutande revaparidzi vanokurudzirana. Zvimwe zveakakosha maficha eCoPromote ayo anobatsira brand / zvemukati vagadziri kuwedzera kwavo kwehupenyu vanosanganisira: Chinangwa - Nhengo dzese dzePromote dzinosaina kusevhisheni nechinangwa chekugovana mameseji emumwe, nepo neFacebook, kugovaniswa kwechitatu bato zvemukati kuri kwechipiri- pfungwa. Engagement - Iyo yepakati share share pa